Ya Kun ရဲ့ နောက်ထပ်မရနိုင်တဲ့ The Whole December Promotion | The Restaurant Guides for Myanmar
Ya Kun ရဲ့ နောက်ထပ်မရနိုင်တဲ့ The Whole December Promotion
တစ်နေ့တာရဲ့ မနက်ခင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ အရသာရှိတဲ့ မနက်စာနဲ့ မဖြတ်သန်းချင်ကြဘူးလား? မနက်စာတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နေ့လည်စာ၊ ညနေစာတွေပါ ရနိုင်တဲ့ Ya Kunက သူ့ရဲ့ အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို ပရိုမိုးရှင်းတွေ ပေးနေပါတယ်နော်။
အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် ဆိုင်ထိုင်စားခွင့် မရပေမယ့် Takeawayတွေ၊ Food Delivery Service တွေနဲ့ အဆင်ပြေနေတုန်းပါပဲ။ စားရတဲ့ အစားအစာချင်းတူနေရင်တောင် ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ စားရတဲ့ အစားအစာက ပိုပြီး အရသာရှိနေတာမျိုးပါ။
ဒါ့ကြောင့် Ya Kunရဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး တစ်နေ့တာကို ဖန်တီးလိုက်တော့နော်။
Sweet Decemberမှာ Ya Kun ရဲ့ အထူး Promotion အနေနဲ့ အရသာရှိပြီး လူကြိုက်များတဲ့ စင်ကာပူကြက်ဆီထမင်း၊ ကြက်သားချဉ်စပ်၊ ကြက်ပင်စိမ်းနှင့်ထမင်း၊ တူနာမေရာနိစ်၊ ကြက်သားပြားနှင့်ချိစ် အစရှိတဲ့ A La Carte Menu နဲ့ Sandwiches Menu တွေ အကုန်လုံးကို တစ်ပွဲဝယ် တစ်ပွဲလက်ဆောင်‌ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပရိုမိုးရှင်းကို ရဖို့ဆိုရင် Yangon Door2Door နဲ့ မှာပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့နဲ့ ပို့ဆောင်ပေးဦးမှာဆိုတော့ တန်ပြီးရင်း တန်ပဲဗျို့။
Order တင်ရန် >> Link
Foodpanda နဲ့အတူ Ya Kunရဲ့ နောက်ထပ် ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုကတော့ The Whole December Promotion ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုမိုးရှင်းက Ya Kunရဲ့ Menuထဲက ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တာကို Foodpandaနဲ့ မှာရင် 50% OFF Discount ရရှိမှာဆိုတော့ ဒီလို အခွင့်အရေးကြီးကို လက်လွှတ်မခံဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ပို့ဆောင်ခကလည်း အခမဲ့ဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲ? ဒီလိုတန်လွန်းတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကို နောက်မကျရအောင် Foodpanda နဲ့ အခုပဲ မှာလိုက်တော့နော်။
ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ရှိတဲ့ Ya Kun ဆိုင်တွေကို ရှာဖွေရန် >> https://bit.ly/3alx5T5
နှစ်သစ်မှာ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပရိုမိုးရှင်းပေးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်(၈)ဆိုင်
Thai Street Food တွေကို 50% OFFနဲ့ Chillခွင့် ရမယ့် အခွင့်အရေး
New Year မှာ 50% OFF နှင့်အတူ Electric Pot ရရှိမယ့် Hotpot Paradise
Pizza Hut က Pizza တွေကို 40% off နဲ့ စားမလား ? 50% off နဲ့ ကြိတ်မလား ?